Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguPavel
Ime kwindawo ekhuselweyo yamadama amaninzi, imithombo yamanzi ahlaziyekileyo kwimimandla yasekhaya kunye nesixeko esilikomkhulu sasePrague, singqongwe ziinkuni ezininzi, amasimi, amadlelo kunye nemilambo.
Kumgangatho wokuqala, kukho amagumbi amane abanzi, atofo-tofo, ahonjiswe kakuhle nahonjiswe kakuhle aneebhedi ezintathu ezijonge ihlathi elikufuphi negadi yeziqhamo zeplum. Igumbi ngalinye linegumbi lalo lokuhlambela elinesinki, ikona yeshawa kunye nendlu yangasese kwaye amabini kuwo anokufikelela ngokuthe ngqo kwibalcony. Iindwendwe zethu zinokusebenzisa ibhedi kunye nebhedi eyongezelelweyo ukuba kuyimfuneko
Indlu inokufumaneka kwidolophana yaseVitice (malunga nama-20 kuphela abemi).
Emva kwendlu kukho indawo yokuhlala enetafile nezitulo. Kwimeko ezolileyo yehlathi elikufutshane, kusetyenziswa indawo yomlilo, igrill okanye icuba, iindwendwe zethu zichitha ixesha elide ngokuhlwa nobusuku zincokola kwaye zilungiselela kwaye zitya ukutya neziselo.
Ibala lezemidlalo lengca
Kwabo bangonelisekanga kukuzipholela nje, kukho inkundla yengca elungele imisebenzi eyahlukeneyo, eyile yevoli, "ibhola yentenetya", ibhedminton, ibhola ekhatywayo, ifrisbee, nokunye.
Ukuze ujonge ubume bendawo ezingqongileyo kwaye njengenye indlela yokuphumla okusebenzayo iindwendwe zethu zinokuqesha ukuya kuthi ga kwiibhayisekile ezi-5 zeentaba.
Emva kwendlu kukho indawo yokuhlala enetafile nezitulo. Kwimeko ezolileyo yehlathi elikufutshane, kusetyenziswa indawo yomlilo, igrill okanye icuba, iindwendwe…